I-USA ibhengeze ngokusesikweni i-2020 yoNyaka oMtsha kwiiyure ezili-14 ngaphambi kweWashington DC: Biba Anu Nuebu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-USA ibhengeze ngokusesikweni i-2020 yoNyaka oMtsha kwiiyure ezili-14 ngaphambi kweWashington DC: Biba Anu Nuebu
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba eziyiFiji • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGuam Breaking • Iindaba eziseKiribati • Iindaba eziNtsha zaseNew Zealand • iindaba • Iindaba zaseSamoa eziziiNdaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zeVanuatu Breaking • Iindaba ezahlukeneyo
Disemba 31, 2019
I-United States yangena ngokusemthethweni kule minyaka ilishumi ili-14 ngaphambi kweWashington DC.
Nyakhomtsha! Biba Anu Nuebu! Xa iGuam ibala uNyaka oMtsha ka-2020 yayingo-10.00 kuphela eNew York ngoDisemba 31. Ndikunye neGuam, iUnited States yangena ngokusemthethweni kule minyaka ilishumi intsha.
Isiqithi esiyiparadesi iGuam ebekwe nje ngenqwelomoya ukusuka eManila kukhala e-USA Unyaka Omtsha. Yonke imihla i-Guam iqala usuku lwaseMelika, kwaye bakwenza oku ezinzulwini zobusuku ngamaqela, imisebenzi yezomlilo kunye nemisebenzi emininzi hayi kwiihotele ezidumileyo zeholide kule paradesi yeholide. Yayibubusuku obuhle e Guwam.
Iilwandle ziya kupakishwa namhlanje nge-1 kaJanuwari kwaye kwangaxeshanye, iNew York iyakuwisa ibhola.
onwabile Unyaka Omtsha nawo ukuba Samoa kunye neChristmas Island eKiribati-amazwe okuqala kwihlabathi ukungena kwi-2020.
In Samoa, Unyaka Omtsha U-Eva wayezolile ngakumbi kunesiqhelo xa ethathela ingqalelo ilizwe liphela nje liyoyikeka ngempilo ebuhlungu ngemasisi ebulala uninzi. Ngelixa iziqhushumbisi zaqhushumba ezinzulwini zobusuku zivela kwiNtaba iVaea, ejonge kwikomkhulu, iApia, ukuphela konyaka yayilixesha losizi nokukhumbula.
Umboniso womlilo ovela kwiSky Tower usungule iAuckland, eNew Zealand ibhiyozela unyaka omtsha. Umboniso omkhulu womlilo waseNew Zealand ukhatshwa yi-lasers kunye noopopayi, eyokuqala kwi-Sky Tower.
Urhulumente waseFiji unjalo ukuvalwa kweengxowa zeplastiki ukusukela namhlanje kwaye ilizwe lijoyina uluhlu olukhulayo lwamazwe ePacific ukwenza njalo.
Iziqithi zeMarshall Islands, iVanuatu, iNiue, iSamoa kunye neNew Zealand sele zisebenza ngelixa elona lizwe linabantu abaninzi ePacific, iPapua New Guinea, libajoyina ekupheleni kwenyanga ezayo.
Ngaphaya kweZoom: I-IMEX yaseMelika yenze iintlanganiso zobuqu zaba mnandi...
Iimbadada Resorts Black Friday Deal
I-Canada iya eIndiya ngeenqwelomoya kwiAir Canada ngoku
Inkqubo yeQela leMATES elasungulwa yi-Outback Steakhouse kunye ...
UMlawuli omtsha we-Explore Minnesota Tourism ogama lakhe
ICarnival Corp. ngoku ukuthumela ii-Cruises ezili-110 eJamaica